ပါးစပ်နဲ့ လိင်အင်္ဂါ ထိတွေ့ရာက ရောဂါပိုး ကူးနိုင်ပါတယ် | ATK's Explicit Blog
အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး လိင်ဆက်ဆံရာမှာ လိင်အင်္ဂါနဲ့ ပါးစပ် ထိတွေ့ခဲ့ပါက ရောဂါကူးနိုင်ပါသလား။ ကူးနိုင်တယ်ဆိုခဲ့လျှင်လည်း နှစ်ဦးစလုံး အပြန်အလှန် ကူးနိုင်ပါသလား။ ကျွန်တော်ကြားဖူးတာတွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေလို့ ဘယ်စကားကို ယုံရမှန်းမသိ ဖြစ်နေလို့ပါ။
နောက်တစ်ချက်က ကလေး မရှိသေးသူ အမျိုးသမီးရဲ့ သားမြတ်မှတစ်ဆင့် ရောဂါကူးနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ အတိအလင်း တစ်ခွန်းတည်း ပြောရရင်တော့ လိင်အင်္ဂါနဲ့ ပါးစပ် ထိတွေ့ရင် ရောဂါ ကူးနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့…
လိင်အင်္ဂါမှာ ပေါက်တဲ့ ရေယုန်နဲ့ ခံတွင်းတ၀ိုက်မှာ ပေါက်တဲ့ ရေယုန်က ပိုးမျိုးစိတ်ချင်း မတူပေမယ့်လည်း တစ်မျိုးက တစ်မျိုးဆီကို ပါးစပ်နဲ့ လိင်အင်္ဂါ ထိတွေ့ရာက အလွယ်တကူ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ သည်မှာတော့ အပြန်အလှန်ပါ။ ဆောင်ရွက်သူရော၊ ခံယူသူပါ ကူးစက်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ သတိထားသင့်တာက ရေယုန် ပေါက်နေတာကို မမြင်ရသည့်တိုင် ပိုးကတော့ ရှိနေနိုင်သလို ကူးလည်း ကူးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က ရေယုန် ဗှိုင်းရပ်(စ်)ပိုးဟာ အရေပြားချင်း ထိမိရုံနဲ့ ကူးတတ်တာမျိုးမို့ ကွန်ဒုံး သုံးရင်တောင်မှ စိတ်မချရဘူးဆိုတာပါပဲ။
ခံတွင်းနဲ့ လည်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်စေတယ်လို့ ယူဆ ယုံကြည်ထားကြတဲ့ ဗှိုင်းရပ်(စ်)ပါ။ မြန်မာတွေ သိပ်တောင် မသိကြသေးပါဘူး။ ဒါကလည်း ရေယုန်လိုပါပဲ၊ အပြန်အလှန်ကူးစက်နိုင်သလို အရေပြားချင်း ထိမိရုံနဲ့ ကူးစက်နိုင်တဲ့ ဗှိုင်းရပ်(စ်)ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ HPV ဟာ မိခင်ကနေ ကလေးကို ကူးစက်လာရာက ခံတွင်းထဲမှာ ရှိနေနိုင်တာမို့ ခံတွင်းမှ လိင်အင်္ဂါကို ကူးနိုင်သလို လိင်အင်္ဂါမှလည်း ခံတွင်းကို အပြန်အလှန် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
လူတွေ အတတ်ဆန်းထွင်ကြရာက ကုရ ခက်တဲ့ လည်ချောင်း ဂနိုရောဂါ (gonorrheal throat infection) ဆိုတာတောင် ပေါ်နေပါပြီ။ ဖိုအင်္ဂါနဲ့ ပါးစပ် ထိတွေ့တဲ့အခါမှာ ဆောင်ရွက်သူရော၊ ခံယူသူမှာပါ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ မအင်္ဂါနဲ့ ထိတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဆောင်ရွက်သူမှာ ရောဂါပိုးရှိနေရင် ခံယူသူမှာ ကူးစက်နိုင်သော်လည်းပဲ ခံယူသူမှာ ပိုးရှိနေရင်တော့ ဆောင်ရွက်သူဆီ ကူးစက်နိုင်ချေ နည်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါလည်း ယတိပြတ်တော့ ပြောလို့ မရသေးပါဘူး။ နောက်ဆုံးပေါ် ရောဂါဆန်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတာမို့ သုတေသနပိုင်းမှာ သိပ်မကျယ်ပြန့်လှသေးလို့ပါ။
လိင်ဆက်ဆံတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပါးစပ်နဲ့ လိင်အင်္ဂါထိတွေ့စေတဲ့အဆင့်အထိပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဇနီး ခင်ပွန်း မဟုတ်သေးသူများနဲ့ လက်လွတ်စပယ် မလုပ်သင့်ပါဘူး။
HIV တစ်မျိုးတည်းတင် ကူးစက်နိုင်တာ မဟုတ်ဘဲ တခြား လိင်မှ တစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေလည်း ရှိတာမို့ ကိုယ်နဲ့ လက်မထပ်ခင် ကိုယ့်ရည်းစား အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးပင် ဖြစ်လင့်ကစား စိတ်ချ လက်ချ အကာအကွယ်မဲ့ မပတ်သက်သင့်ကြောင်း ထပ်လောင်း နှိုးဆော်လိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
from → For Men, For Women, Information, STD
← ဒစ်ပို ထိုးဆေးအကြောင်း သိချင်ရင်
ယောက်ျားတွေ အကြောက်ဆုံး ရောဂါနှင့် စပ်လျဉ်း၍ →
အတော် အန္တရာယ်များတာပဲ။ ဂျာချင်တဲ့သူတွေတော့ ဒုက္ခရောက်ပြီ။
ဒီarticle အတွက် တော်တော် ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ကျွန်တော်သိချင်တာက ဒီလိုဆက်ဆံတာကို လူတော်တော်များများ ကြိုက်ပါသလား။ ရာခိုင်နှုန်းအရသိပါရစေ။(ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့)ပြီးတော့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဆက်ဆံနည်းထဲမှာ ဒီလိုမျိုး ပါပါသလား။ နောက်တခုကတော့ personal မေးခွန်းပါ။ ဆော်ကားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာကကော ဒီလိုမျိုးကို နှစ်သက်ပါသလား။ ဆရာက ရည်းစားလည်း များခဲ့ပြီးတော့ ရည်းစားတွေနဲ့ လင်ခန်း မယားခန်း ရောက်ဖူးတဲ့သူမို့လို့ မေးကြည့်တာပါ။ အမျိုးသမီးတော်တော်များများက နှစ်သက်ပါသလား။ သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေးခွန်း ပထမပိုင်းကို ဖြေရရင် ဒူးရင်းသီးတို့၊ တညင်းသီးတို့၊ ငါးပိတို့ကို လူအတော်များများက ကြိုက်သလို မကြိုက်တဲ့သူတွေလည်း အများအပြားရှိပါတယ်။ စစ်တမ်းကောက်ယူထားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ မဖြေနိုင်ပါ။
မေးခွန်းဒုတိယပိုင်းကတော့ စော်ကားရာ မရောက်ပေမယ့် မသိသားဆိုးရွားလှရာ ရောက်ပါတယ်။ သိချင်၊ စပ်စုချင်တာ လူ့သဘာဝမို့ အပြစ်မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် “စည်း”ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ယဉ်ကျေးတဲ့ (တောမကျတဲ့) လူ့ဘောင် (civilised society) မှာဆိုရင် အဲလို သိပ်အတွင်းကျတဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မေးခွန်း ဝေးစွ၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်၊ လုပ်ခ လစာစတာတွေကိုတောင် သေလုအောင် သိချင်နေဦးတော့ မေးလေ့ မေးထ မရှိပါဘူး။ လူငယ်တွေကို ကမ္ဘာကြည့် ကြည့်မြင်တတ်တဲ့၊ နိုင်ငံတကာမှာ လူရာဝင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာစေချင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အများအတွက်လည်း အကျိုးမရှိ၊ ကိုယ့်အတွက်လည်း အကျိုးမရှိပေမယ့် သိချင်စိတ်၊ စပ်စုချင်စိတ်အပြည့်နဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို မေးချင်လှပေမယ့်လည်း မျိုသိပ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးသွားပါလို့ လေးနက်စွာ အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ကောင်းတယ်ကိုကြီးကျော် အဲလိုလူတွေကို ဖဲ့သာဖဲ့။
အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေရဲ့ လိင်အင်္ဂါကို ပါးစပ်ဆက်ဆံ ပေးလို့ ထွက်လာတဲ့ sperm ကိုအမျိုးသမီး က မျိုချလိုက်ရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနှိုင်ပါသား ခင်ဗျာ အဲဒီအချက်လေးမသိလို့ ဖြေကြားပေးပါ
ဘယ်ရှိနိုင်ပါမလဲဗျာ sperm တွေက ပါးစပ်တဆင့် အစာအိမ်ထဲရောက်သွားပြီး ချေဖျက်ခံလိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်မေးချင်တာကနမ်းတာဟာ HIV ပိုးကူးနိုင်မကူးနိုင်သိချင်ပါတယ်…….
ဘာကို နမ်းတာလဲ။ ဘာနဲ့ နမ်းတာလဲ။ သေချာတာကတော့ ကိုယ့်လက်ဖမိုးကိုယ် နှာခေါင်းနဲ့ နမ်းမိလို့တော့ HIV ပိုး မကူးဘူးခင်ဗျ။ 😀
နမ်းတယ် ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ လမင်းကဘာကိုနမ်းချင်တာလဲ အပေါ်ကိုနမ်းချင်တာလား အောက်ကိုနမ်းချင်တာလားထည့်ပြောပေးပါ။ ဒါမှပြန်ဖြေပေးလို့ရမှာပါ။။။
ကျွန်တော်သိချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ် ပါးစပ်နဲ့ လိင်အင်္ဂါနဲ့ အသွင်းအထုတ် ၁၅ကြိမ်လောက် လုပ်ရုံနဲ့ ခံတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါ ဘာများရနိုင် ပါသလဲ ။ ကျနော်ရဲ့ အင်္ဂါမှာ အနာမရှိပါဘူး ကျနော့မိန်းမနဲ့ပဲ ဆက်ဆံပါတယ် အခြားသူများနဲ့ဆက်ဆံခြင်းမရှိပါဘူး။ oral sex မလုပ်ခင်လည်း ရေဆေးပါတယ်။sperm ထွက်တဲ့အထိ မလုပ်ဘူးဗျ။ အဲလိုအချက်နဲ့ဆိုရင် ခံတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါ ဘာများရနိုင်ပါသလဲ သိချင်လို့ပါဗျ
ကျွန်တော်သိချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ် ပါးစပ်နဲ့ လိင်အင်္ဂါနဲ့ အသွင်းအထုတ် လုပ်တာကိုမိန်းမကမကြိုက်ဘူးဘာလုပ်သင့်သလဲ
သူ့ကိုသာ မေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ သူလည်း ကြိုက်နိုင်၊ ကိုယ်လည်း အဆင်ပြေနိုင်မယ့် “ကိုယ့်ဘက်က များများလျှော့၊ သူ့ဘက်က နည်းနည်းလျှော့”နည်းလမ်းကို သူမှ သာလျှင် ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါဗျာာာာာ 😉
sky net permalink
ကိုယ့်မိန်းမမှာရောဂါရှိရင်တော့ ရနိုင်တာပေါ့။ ကိုယ့်မိန်းမမှာမရှိပဲ ကိုယ့်မှာရောဂါရှိနေရင်တော့ သူရောဂါရပြီပေါ့..။ ဒါများ လွယ်လွယ်လေးကို ..။
အဖြေကမိုက်တယ်နော်။ ခဏလာခဲ့ပါလား ပြုစုစေချင်လို့
ဆရာမိန်းကလေးချင်းစုံမက်ပြီး အတူတူဆက်ဆံတာကကော … စိတ်ရောဂါလား ဆရာ …. ဘယ်လိုရောဂါမျိုးတွေ ရနိုင်ပါလဲဆရာ ….. အပြန်အလှန် အောရယ် နဲ့ သ၀ါပြုရင်ကောဆရာ … ဘယ်လိုရောဂါရနိုင်ပါလဲရှင့် …
HPV ဆိုတဲ့ ဗှိုင်းရပ်(စ်) ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး ကာကွယ်ဆေးထိုးထားရင်တော့ အဲဒီ့ ပြဿနာ နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ရောဂါ ကင်းရင်တော့ ပြဿနာ သိပ်မရှိပါဘူး။
ဆရာ မိန်းတွေက anal sex ဆက်ဆံခံရတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့မှာ သာယာတဲ့ ခံစားမှု ဖြစ်မဖြစ် ဆရာ သိရင်ဖြေကြားပေးပါ
အဖြေက ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ဆိုတဲ့ အဖြေပါ။ ကိုယ်ဘာသာ အရင် လုပ်ကြည့်လိုက်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ငယ်ပါနဲ့ အရွယ်အစားတူတဲ့ သခွားသီးတစ်လုံးရှာ၊ ကိုယ့်ဘာသာ စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့။ ကိုယ်သာယာနိုင်ရင် သူတို့လည်း သာယာနိုင်မှာပေါ့ ခင်ဗျား။ 🙂 😀
ရောဂါဆိုတာ နိုင်ငံအလိုက် ရှိတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လူရှိနေရင် ရောဂါ ရှိနေမှာပါ။
I want to know sexycase.l read ‘see ,understand.
yu lay permalink
ချစ်သူက်ိုorasexဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ဘူးတယါလွနါခဲ့တဲ့၃ရက်လောက်ကပါသူကအသောကါစားကင်းသလိ်ု၂ယောက်လုံးကfirst loveတွေပါသိချင်တာကoral sexပိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်နည်းလေးပါကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါလားနော်
သိချင်ရင် google မှာရှာကြည့်ပါလား